Wasiirka shaqaalaha oo amray in la baaro cabashooyin ka dhashay mashruuca SGR – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Wasiirka shaqaalaha oo amray in la baaro cabashooyin ka dhashay mashruuca SGR
STN News July 12, 2018 Leave a comment
Wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee dalka Ukur Yatani ayaa soo magacaabay guddi baaritaano qota dheer ku sameeynaya cabasho ka soo yeertay qaar ka mid ah howlwadeenada Kenyaanka ah ee wax ka dhisaya marinka casriga ee tareenada ee SGR.
Xubnaha guddigan ayaa waxaa ka mid ah sarakiil sar sare oo ka tirsan wasaaradda shaqaalaha waxayna eegi doonaa dhab ahaanshaha eedeymaha loo jeediyay shaqaalaha ka soo jeedo dalka shiinaha ee mashruucaasi gacanta ku haya.
Qaar ka mid ah warbaahinta dalka ayaa tabiyay in dadka Kenyaanka ah ee qutul maalmeedkooda ka raadsanaya dhisiidda mashruucaasi ay takoor iyo falal ku saleysan cunsuriyanimo kala kulmaan sarakiisha dhalasho ahaan ka soo jeedo shiinaha.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in hadii cabashooyinkaasi la xaqiijiyo, ay noqonayso xadgudub ka dhan ah dastuurka.
Cabashooyinka Kenyaanka ka soo yeeray ee la baaraya waxaa ka mid ah in sarakiisha shiinaha aysan u ogolayn inay hal meel wada fariistaan ama ka wada cunteyaan sido kalena baabuurta wada raacaan.
Ukur Yatani ayaa ballanqaaday in cidii falalkaasi lagu caddeeyo dacwad lagu soo oogayo
Bayana uu soo saaray wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee dalka , ayaa waxaa lagu xusay in guddiga arrinkan loo xilsaaray looga fadhiyo inuu warbixin ku soo gudbiyo 7 maalmood gudahood.
Shalay ayay ahayd markii afhayeenka dowlada dhexe Eric Kirathe oo shir jaraaid qabtay uu gaashaanka u daruuray eedeymo loo soo jeediyay shaqaalaha dhalasho ahaan ka soo jeedo wadanka shiinaha ee wax ka dhisaya marinka casriga ee tareenada ee loo yaqaano SGR.
Waxaa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in howlwadeenada kenyaanka ah lagula kacay fal ku saleysan cunsuriyanimo.
Mr. Kiraithe ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin cabasho rasmi ah oo loo soo gudbiyay oo arrinkaasi ku aaddan.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in kastoo dowlada ay mas’uuliyad ka saarantahay ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shacabkeeda hadana aanan loo baahneyn in qiil laga dhigto hadal haynta ah xaqeena.
← Aqalka sare ee dowlada Ireland oo mamnuucay in la isticmaalo badeecooyinka laga soo saaray degaanada ay Israa’iil haysato
Hay’adda caafimaadka ee WHO oo digniin ka soo saartay dawooyinka HIV-da ee ay haweenka qaataan →